यौ’न स’न्तुष्टिबारे म’हिलाहरुले झु’ट बो’ल्नुको कारण यस्तो छ ! जानी राखौं ! – Life Nepali
यौ’न स’न्तुष्टिबारे म’हिलाहरुले झु’ट बो’ल्नुको कारण यस्तो छ ! जानी राखौं !
काठमाडौँ । यौ’न स’म्बन्धमा महिलाहरु त्यति खु’लेर कुरा गर्दैनन् । उनीहरु यौ’न स’न्तुष्टिको विषयमा झु’ट बो’ल्ने गर्छन् । उनीहरु आफु सन्तुष्ट नभए पनि आफ्नो पाटनरसंग जुतो बोल्ने गर्छन् । कतिपय अध्ययन प्रतिवेदनले महिलाहरु यौ’न स’न्तुष्टि न’पाए पनि आफ्नो यौ’नजो’डीसँग आफूले सन्तुष्टि प्राप्त गरेको भनी झू’ट बोल्ने (फेक अर्गाजम) गरेको देखाइसकेका छन् । तर, उनीहरु किन यस्तो गर्छन् त ? केहि कारणहरु यस्ता छन्:- *** पूरा भिडियो हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ***
१. पुरुषको अ’हम्:- महिलाको फेक अर्गाजमको पछाडि धेरै कारण हुन्छन् । त्यसमध्ये एक हो पुरुषको अहम् । पुरुषहरु महिलालाई बे’डमा सन्तुष्ट गर्ने कुरालाई आफ्नो अ’हम् अथवा इ’गोको रुपमा लिन्छन् । त्यसैले पुरुषको अहममा ठेस नपुगोस् भनेर उनीहरु जु’ट बोल्छन् ।
२. अ’न्योलमा रहनु:- केही महिलाले आफू अर्गाजममा नपुगे पनि आफूले अ’र्गाजममा न’पुगेको रियाक्सन देखाएमा पुरुष पा’र्टनरले त्यसलाई कुन रुपमा हेर्छन् भन्ने विषयमा अ’न्योलमा रहन्छन् । यही अ’न्योलका कारण उनीहरुले अ’वास्तविक हाउभाउका साथ फेक अ’र्गाजमको स’हारा लिने गर्छन् ।
३. मू’ड न’हुनु:- महिलाहरु कतिपय अवस्थामा यौ’नका लागि त’यार न’भएका हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा यदि यौ’न स’म्पर्क भ’इहाले पनि उनीहरु च’रममा पुग्न सक्दैनन् । तर, उनीहरु आफ्नो पा’र्टनरको वि’श्वासमा कमी नआओस् भन्ने हेतुले झू’टको सहारा लिन्छन् ।
४. न’र्भस हुनु:- पुरुषले कम्फोर्टेबल महसूस गरेपनि महिलाले क’म्फोर्टको अनुभूति नगरी चि’न्तित हुन सक्छन् । यसको प्रभाव यौ’नमा पर्छ र महिलाले आफूले आ’नन्द न’लिए पनि पा’र्टनरको अनुभवलाई राम्रो बनाइदिन आफू खुसी र सन्तुष्ट भएको फे’क अर्गाजम गर्छन् । *** पुरा भिडियो हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ***
Previous झ’ण्डै डेढ करोडले हेरिसकेको भि’डियोमा यि यु’वतीले के गर्दैछिन ? हेर्नुहोस भिडियो !
Next यौ’न स’न्तुष्टिबारे म’हिलाहरुले झु’ट बो’ल्नुको कारण यस्तो छ ! जानी राखौं !